အိမျမှုကိစ်စတှကေို တဈယောကျယောကျကို လှဲပေးလိုကျတဲ့အခါ ပိုပွီးပြျောရှငျသူတှေ ဖွဈလာစကွေောငျး လလေ့ာတှရှေိ့ - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge အိမျမှုကိစ်စတှကေို တဈယောကျယောကျကို လှဲပေးလိုကျတဲ့အခါ ပိုပွီးပြျောရှငျသူတှေ ဖွဈလာစကွေောငျး လလေ့ာတှရှေိ့
အိမျမှုကိစ်စတှကေို တဈယောကျယောကျကို လှဲပေးလိုကျတဲ့အခါ ပိုပွီးပြျောရှငျသူတှေ ဖွဈလာစကွေောငျး လလေ့ာတှရှေိ့
သူစိမျးတဈယောကျက သငျ့ကို တကယျပြျောရှငျစမေယျ့ အရာတဈခုခုကို သှားဝယျဆိုပွီး ဒျေါလာ ၄၀ ပေးလိုကျတယျဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီပိုကျဆံနဲ့ သငျဘာလုပျမယျလို့ စဉျးစားပါသလဲ?။ သငျ့ရဲ့စိတျကို အားပေးဖို့၊ အပနျးဖွဖေို့ အမြားအားဖွငျ့ သုံးနကြေ နညျးလမျးတှဖွေဈတဲ့ အဝတျအစားအသဈတှေ သှားဝယျပဈလိုကျတာမြိုး၊ spa သှားပွီး အနားယူတာမြိုး လုပျကောငျးလုပျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ သငျ့အိမျမှုကိစ်စတှပေျေါမှာ အဲ့ဒီပိုကျဆံနဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမယျလို့ တှေးမိမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ လောငျးရဲပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ဒီဥစ်စာက အလားအလာကောငျးတဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတဈခုလို့ ဆိုပါတယျ။ “ပြျောရှငျမှုကို ပိုကျဆံနဲ့ ဝယျလို့မရဘူးလို့ “လူကွီးတှေ ပွောကွတာဟာ လုံးဝမမှနျပါဘူးတဲ့။ ဘာ့ကွောငျ့ပါလဲ?
ခတျေသဈကမ်ဘာကွီးရဲ့ အဓိကပွဿနာတဈခုက တဈနတေ့ဈနေ့ အခြိနျဘယျတော့မှ မလောကျဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခကျြတဈခုဖွဈပါတယျ။ လူအမြားစုဟာ စိုးရိမျစိတျမြားခွငျး၊ အိပျမပြျောခွငျး၊ ကနျြးမာရေးနှငျ့ မညီညှတျတဲ့ အလအေ့ထတှေ တိုးလာခွငျးနှငျ့အတူ ကိုယျ့ရဲ့ ဘဝအရညျအသှေးတှကေို သိသိသာသာ လြော့နညျးစတေဲ့ အခြိနျရဲ့ ဖိအားပေးမှုအောကျမှာ နထေိုငျကွရပါတယျ၊ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက “သငျ့ကို အခြိနျပိုပေးနိုငျစှမျးရှိတဲ့ အရာတှပေျေါမှာ ပိုကျဆံသုံးခွငျးဟာ သငျ့ဘဝ စိတျကနြေပျမှုနှငျ့ အလုံးစုံ ပြျောရှငျမှုကို တိုးတတျစနေိုငျတယျလို့” ဆိုပါတယျ။ “ပိုကျဆံစုဖို့ အခြိနျသုံးမလား”(သို့)”အခြိနျစုဖို့ ပိုကျဆံသုံးမလား” ဘယျအရာက ပိုကောငျးတဲ့ ရှေးခယျြမူလညျးဆိုတာ သငျမသိသေးဘူးဆိုရငျ ဒီလလေ့ာမှုက သငျ့ကိုဆုံးဖွတျခကျြခနြိုငျပွီး ပြျောရှငျမှုကို ရှာဖို့အတှကျ သငျ့ပိုကျဆံအိတျကို ဖှငျ့မယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ ယုံကွညျပါတယျ။
ဥပမာ- ခကျြပွုတျခွငျး၊ သနျ့ရှငျးရေးလုပျခွငျး စတဲ့အိမျမှုဝယြောဝစ်စတှကေို အခကွေးငှပေေးပွီး တာဝနျ လှဲအပျပေးရငျဆိုတဲ့ ဒီလလေ့ာမှုကို စတငျဖို့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားက ပါဝငျသူမြားကို မေးမွနျးခဲ့ပါတယျ။ စာတမျးအဖွလှောမြားမှာ သူတို့ရဲ့ အလုံးစုံပြျောရှငျမှုနှငျ့ စိတျဖိစီးမှု ခံစားခကျြတှကေို နှိုငျးယှဉျခဲ့ကွပါတယျ။ စဈတမျးအားလုံးမှာ လူတှကေ မနှဈမွို့ဖှယျ နစေ့ဉျလုပျငနျးမြားကို ရှောငျဖို့ ပိုကျဆံ ပုံမှနျသုံးတဲ့အခါနှငျ့ သူတို့အားသှားတဲ့ အခြိနျကို တခွားလှုပျရှားမှုတှမှော သုံးတဲ့အခါ သူတို့ဘဝကို ပိုပွီးစိတျကနြေပျမှုရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီရလဒျက ဝငျငှေ (သို့) အလုပျခြိနျ၊ သားသမီးအရအေတှကျ၊ အိမျထောငျရေးအခွအေနပေျေါမှာ မူတညျနတော မဟုတျပါဘူး။
သုတသေီမြားက ရလဒျတှကေို အတညျပွုပေးဖို့ ကှငျးဆငျး စမျးသပျမှုတဈခု ပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ သူတို့က လူကွီးအယောကျ (၆၀)ကို ကွုံရာရှေးခယျြလိုကျပါတယျ။ weekend တဈခုစာ သူတို့အခြိနျကို save ဖွဈမယျ့ ဝယျယူမှုတဈခုပျေါမှာ သုံးဖို့ ဒျေါလာ ၄၀ ပေးလိုကျပါတယျ။ နောကျ ဒျေါလာ ၄၀ကို နောကျထပျ weekend အတှကျ ပစ်စညျးတဈခု ဝယျယူမှုပျေါမှာ သုံးဖို့ ပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါက အံ့သွစရာတဈခုလို ဖွဈလာစပေါတယျ။ လူတှဟော သူတို့မလုပျခငျြတဲ့ တာဝနျတှကေို လှဲပွောငျးဖို့ ဒီပိုကျဆံကို သုံးတဲ့အခါ ပိုပွီးပြျောရှငျတာကို ခံစားရပါတယျ။ ဒီအတှအေ့ကွုံက စိတျဖိစီးခြိနျနညျးခွငျးနှငျ့ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အကြိုးသကျရောကျမှုကို တိုးတတျစခွေငျးနှငျ့ ဆကျစပျနခေဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ လူတှကေ တကယျ့ဘဝမှာတော့ မှနျကနျတဲ့ ရှေးခယျြမှုကို လုပျလမေ့ရှိပါဘူး။ လူကွီး ၉၈ယောကျရဲ့ စဈတမျးတဈခုမှာ သူတို့ထဲက ၂% သာ သူတို့အခြိနျကို save ဖွဈဖို့ ပိုကျဆံသုံးတယျလို့ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒီအပွုအမှုတှမှော အကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ ပထမတဈခုက သူတို့ဟာ မလိုအပျတဲ့ အရာတှပေျေါမှာ သုံးဖို့ လုံလောကျတဲ့ ပိုကျဆံမရှိတာကွောငျ့လို့ ယုံကွညျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့မှာ ပိုကျဆံမြားမြားစားစားမရှိရငျတောငျ စိတျအနှောကျအယှကျဖွဈတဲ့ တာဝနျတဈခုကို ဖယျရှားဖို့ ပိုကျဆံသုံးခွငျးက တျောတျောလေးစမတျကတြဲ့ ရှေးခယျြမှုဖွဈတယျဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ မွငျနိုငျပါတယျ။
တခွားကိစ်စတှမှော လူတှကေ ဒီတာဝနျတှကေို လှဲလိုကျတာနဲ့ ပတျသတျပွီး အပွဈရှိတယျလို့တောငျ ခံစားရတာ (သို့) ကိုယျ့ ကိုယျ့ပိုငျအိမျနဲ့ ခွံဝနျးကိုတောငျ မထိနျးသိမျးနိုငျဘူးလို့ သူမြားမွငျမှာကို မလိုခငျြကွတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ တခါတရံမှာ သူတို့ကပဲ သူတို့ဆုံးရှုံးနတေဲ့အရာတှကေို နားမလညျကွပါဘူး။ အထူးသဖွငျ့ ထုတျကုနျတဈခုပျေါမှာ ပိုကျဆံဘယျလောကျမြားမြား သုံးသှားလညျးဆိုတာ သိဖို့ လှယျကူသျောလညျး သငျတဈခုခုကို ပွောငျးလဲပဈရငျ ရရှိလာနိုငျတဲ့ သငျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှုကို ခနျ့မှနျးဖို့ နညျးလမျးမရှိပါဘူး။
သငျ့ကို ပိုပွီးပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးနိုငျတဲ့ လှို့ဝှကျခကျြတဈခုကို ယခု သိသှားပွီလို့ ယုံကွညျပါတယျ။ အိမျထာငျရှငျမတှအေနနေဲ့လညျး ကိုယျမလုပျခငျြတဲ့ အိမျမှုကိစ်စတှကေို ကွိတျမှိတျလုပျနမေယျ့အစား တခါတရံ အိမျအကူငှားလိုကျတာမြိုး၊ ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးတှပေျေါမှာ ပိုကျဆံသုံးလိုကျတာမြိုးဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့ ပြျောရှငျမှုနှငျ့ အခြိနျပိုကို ရယူပိုငျဆိုငျပါ။ ရလာမယျ့ ပြျောရှငျမှုနှငျ့အတူ တနျဖိုးရှိတဲ့ အခြိနျတှနေဲ့ ပတျသတျပွီး တှေးပါ။ တကယျတော့ တခါတရံမှာ ကြှနျတျောတို့ဟာ အလုပျခြိနျပမာဏ တိုအောငျလုပျနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မလုပျခငျြတဲ့ အရာတှကေို လုပျနရေတဲ့ ဖွုနျးတီးသှားသော အခြိနျတှကေို ရပျတနျ့ဖို့ ၊ ကိုယျ့ဘဝကို ပြျောရှငျအောငျ လုပျပေးနိုငျစှမျးရှိတာကတော့ ပိုကျဆံပါပဲ။
အိမ်မှုကိစ္စတွေကို တစ်ယောက်ယောက်ကို လွှဲပေးလိုက်တဲ့အခါ ပိုပြီးပျော်ရွင်သူတွေ ဖြစ်လာစေကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ
သူစိမ်းတစ်ယောက်က သင့်ကို တကယ်ပျော်ရွင်စေမယ့် အရာတစ်ခုခုကို သွားဝယ်ဆိုပြီး ဒေါ်လာ ၄၀ ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ သင်ဘာလုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားပါသလဲ?။ သင့်ရဲ့စိတ်ကို အားပေးဖို့၊ အပန်းဖြေဖို့ အများအားဖြင့် သုံးနေကျ နည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ အဝတ်အစားအသစ်တွေ သွားဝယ်ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ spa သွားပြီး အနားယူတာမျိုး လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မှုကိစ္စတွေပေါ်မှာ အဲ့ဒီပိုက်ဆံနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်လို့ တွေးမိမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လောင်းရဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီဥစ္စာက အလားအလာကောင်းတဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုလို့ ဆိုပါတယ်။ “ပျော်ရွင်မှုကို ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်လို့မရဘူးလို့ “လူကြီးတွေ ပြောကြတာဟာ လုံးဝမမှန်ပါဘူးတဲ့။ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ?
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဓိကပြဿနာတစ်ခုက တစ်နေ့တစ်နေ့ အချိန်ဘယ်တော့မှ မလောက်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုဟာ စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်တဲ့ အလေ့အထတွေ တိုးလာခြင်းနှင့်အတူ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအရည်အသွေးတွေကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေတဲ့ အချိန်ရဲ့ ဖိအားပေးမှုအောက်မှာ နေထိုင်ကြရပါတယ်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များက “သင့်ကို အချိန်ပိုပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ ပိုက်ဆံသုံးခြင်းဟာ သင့်ဘဝ စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် အလုံးစုံ ပျော်ရွင်မှုကို တိုးတတ်စေနိုင်တယ်လို့” ဆိုပါတယ်။ “ပိုက်ဆံစုဖို့ အချိန်သုံးမလား”(သို့)”အချိန်စုဖို့ ပိုက်ဆံသုံးမလား” ဘယ်အရာက ပိုကောင်းတဲ့ ရွေးချယ်မူလည်းဆိုတာ သင်မသိသေးဘူးဆိုရင် ဒီလေ့လာမှုက သင့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး ပျော်ရွင်မှုကို ရှာဖို့အတွက် သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဥပမာ- ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း စတဲ့အိမ်မှုဝေယျာဝစ္စတွေကို အခကြေးငွေပေးပြီး တာဝန် လွှဲအပ်ပေးရင်ဆိုတဲ့ ဒီလေ့လာမှုကို စတင်ဖို့ သိပ္ပံပညာရှင်များက ပါဝင်သူများကို မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ စာတမ်းအဖြေလွှာများမှာ သူတို့ရဲ့ အလုံးစုံပျော်ရွင်မှုနှင့် စိတ်ဖိစီးမှု ခံစားချက်တွေကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်တမ်းအားလုံးမှာ လူတွေက မနှစ်မြို့ဖွယ် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကို ရှောင်ဖို့ ပိုက်ဆံ ပုံမှန်သုံးတဲ့အခါနှင့် သူတို့အားသွားတဲ့ အချိန်ကို တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ သုံးတဲ့အခါ သူတို့ဘဝကို ပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရလဒ်က ဝင်ငွေ (သို့) အလုပ်ချိန်၊ သားသမီးအရေအတွက်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သုတေသီများက ရလဒ်တွေကို အတည်ပြုပေးဖို့ ကွင်းဆင်း စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က လူကြီးအယောက် (၆၀)ကို ကြုံရာရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ weekend တစ်ခုစာ သူတို့အချိန်ကို save ဖြစ်မယ့် ဝယ်ယူမှုတစ်ခုပေါ်မှာ သုံးဖို့ ဒေါ်လာ ၄၀ ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက် ဒေါ်လာ ၄၀ကို နောက်ထပ် weekend အတွက် ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ယူမှုပေါ်မှာ သုံးဖို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အံ့သြစရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာစေပါတယ်။ လူတွေဟာ သူတို့မလုပ်ချင်တဲ့ တာဝန်တွေကို လွှဲပြောင်းဖို့ ဒီပိုက်ဆံကို သုံးတဲ့အခါ ပိုပြီးပျော်ရွင်တာကို ခံစားရပါတယ်။ ဒီအတွေ့အကြုံက စိတ်ဖိစီးချိန်နည်းခြင်းနှင့် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို တိုးတတ်စေခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လူတွေက တကယ့်ဘဝမှာတော့ မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို လုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ လူကြီး ၉၈ယောက်ရဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုမှာ သူတို့ထဲက ၂% သာ သူတို့အချိန်ကို save ဖြစ်ဖို့ ပိုက်ဆံသုံးတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပြုအမှုတွေမှာ အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ ပထမတစ်ခုက သူတို့ဟာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေပေါ်မှာ သုံးဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပိုက်ဆံမရှိတာကြောင့်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ ပိုက်ဆံများများစားစားမရှိရင်တောင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ တာဝန်တစ်ခုကို ဖယ်ရှားဖို့ ပိုက်ဆံသုံးခြင်းက တော်တော်လေးစမတ်ကျတဲ့ ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
တခြားကိစ္စတွေမှာ လူတွေက ဒီတာဝန်တွေကို လွှဲလိုက်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အပြစ်ရှိတယ်လို့တောင် ခံစားရတာ (သို့) ကိုယ့် ကိုယ့်ပိုင်အိမ်နဲ့ ခြံဝန်းကိုတောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးလို့ သူများမြင်မှာကို မလိုချင်ကြတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ သူတို့ကပဲ သူတို့ဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာတွေကို နားမလည်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်များများ သုံးသွားလည်းဆိုတာ သိဖို့ လွယ်ကူသော်လည်း သင်တစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲပစ်ရင် ရရှိလာနိုင်တဲ့ သင့်ရဲ့ပျော်ရွင်မှုကို ခန့်မှန်းဖို့ နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။
သင့်ကို ပိုပြီးပျော်ရွင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကို ယခု သိသွားပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ အိမ်ထာင်ရှင်မတွေအနေနဲ့လည်း ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို ကြိတ်မှိတ်လုပ်နေမယ့်အစား အိမ်အကူငှားလိုက်တာမျိုး၊ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ်မှာ ပိုက်ဆံသုံးလိုက်တာမျိုးဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွင်မှုနှင့် အချိန်ပိုကို ရယူပိုင်ဆိုင်ပါ။ ရလာမယ့် ပျော်ရွင်မှုနှင့်အတူ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တွေးပါ။ တကယ်တော့ တခါတရံမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အလုပ်ချိန်ပမာဏ တိုအောင်လုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်နေရတဲ့ ဖြုန်းတီးသွားသော အချိန်တွေကို ရပ်တန့်ဖို့ ၊ ကိုယ့်ဘဝကို ပျော်ရွင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကတော့ ပိုက်ဆံပါပဲ။
Previous articleတရုတျဆိုရှယျမီဒီယာက ပြိုမတေို့ကွား ရပေနျးစားနတေဲ့ အားကစားတက်ကသိုလျက ကြောငျးသားတှရေဲ့ ပုံရိပျမြား
Next articleမှတျစလငျအမြိုးသမီးတှအေတှကျ Hijabs ပါဝငျတဲ့ ကီမိုနိုဝတျစုံကို ဖနျတီးခဲ့တဲ့ ဂပြနျကုမ်ပဏီ